Budata BATTLESHIP APOLLO maka Windows
Budata BATTLESHIP APOLLO
Budata BATTLESHIP APOLLO,
BATTLESHIP APOLLO bụ egwuregwu PC isiokwu sayensị nke na-emikpu ndị egwuregwu nọgbọ agha dị egwu, nke aghụghọ netiti nnukwu oghere na ndị na-akwado nkwado.
Ndị na -egwu egwuregwu na -enweta nnukwu ụgbọ agha, họrọ ndị dike nkwado na ikike ndị ọzọ pụrụ iche iji soro ha, ma sonye nọtụtụ ọnọdụ ọgụ ọtụtụ mmadụ. Na ọnọdụ otu-otu, onye ọkpụkpọ ọ bụla na-agba mbọ hụ na agha agha ha dịtere aka karịa agha ọ bụla ọzọ na sistemụ kpakpando na-ada ada. Na ọnọdụ njide Territory, ndị otu na -agbasi mbọ ike ijide isi ihe dị na maapụ ka ha na -agbachitere ndị iro. Nọnọdụ nnọchibido, ndị egwuregwu na -emekọ ihe ọnụ na ndị otu ibe ha ijikwa maapụ ma kpokọta nnukwu ndị agha iji nyere ha aka nagha.
BATTLESHIP APOLLO na-eme ka ahụmịhe atụmatụ ọdịnala oge ochie dị mfe yana iwu na nkeji egwuregwu dị mfe mmụta mana ọ siri ike ịmụta na usoro egwuregwu na-agbanwe. Ọ na -ewere ọnọdụ narị afọ abụọ ka ihe omume egwuregwu Hades Star nke MMO na -aga nke ọma gasịrị.
Ụgbọelu isii, nke ọ bụla nwere ike na adịghị ike dị iche iche nke chọrọ ụzọ aghụghọ dị iche iche
Ihe karịrị modulu iri abụọ nke ndị na -akwado nkwado yana ụgbọ mmiri na -akpasu iwe na nke na -agbachitere
Ọgba aghara agha a na -ahaziri iche iji mepụta ngwa pụrụ iche nezie nke pụtara na ọtụtụ puku ezigbo ndị egwuregwu
Ụlọ ọrụ na-enye ndị egwuregwu ohere ịhazi ịkekọrịta ihe ọmụma wee mepụta otu ndị akwadoro nke ọma maka ọgụ ọtụtụ mmadụ.
Ụdị egwuregwu ọtụtụ mmadụ dị iche iche maka ndị asọmpi na ndị na -emekọrịta ihe
BATTLESHIP APOLLO Ụdịdị
Mmepụta: Parallel Space Inc